War - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 7)
Jilaaga Black Phanter ayaa jilaya filimka cusub ee Apple TV + ee ku saabsan Kevin Durant
Jilaaga Black Phanter Winston Duke inuu jilo taxanaha taxanaha Apple TV ee Kevin Durant
Teknolojiyadaha bulshada ayaa ka dacwoonaya Apple adeegsiga khaldan ee summad ganacsi
Waxay u muuqataa in Apple aysan ka takhalusi doonin dacwadda ay Teknolojiyada Bulshada soo gudbisay 2018 ee ku saabsan isticmaalka aan habboonayn iyo khiyaanada ah ee loo yaqaan 'Memoji brand'.
Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple ee Q4 ayaa lagu dhawaaqi doonaa Oktoobar 30
Oktoobar 30, Apple wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijooyinka maaliyadeed ee rubucii ugu dambeeyay ee maaliyadeed ee Apple, rubuca saddexaad ee 2019.
Batariga ku jira Apple Watch Series 5, Safari 13 kordhinta, iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkii ugu dambeeyay ee Sebtember wuxuu bixiyay dagaal badan. Warkii ugu fiicnaa ee Apple ka soo baxa waxaan ka imid Mac
Wax kasta oo loo diyaariyay furitaanka weyn ee Apple Antara ee Mexico
Wax walba oo loo diyaariyay furitaanka weyn ee waxa uu noqon doonaa dukaanka labaad ee Apple ee Mexico. Apple Antara wuxuu furi doonaa berri 5 galabnimo
Podcast 11.x05: Kumaa yaa wax cusub abuura?
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo kooxda Actualidad iPhone ayaa kulmay si ay u duubaan dhacdo cusub oo ka mid ah barnaamijyadeenii Todo Apple.
Apple waxay soo bandhigtay laba isjiidjiid oo cusub, Emmy Awards, oo ah sii deynta soo socota
Intii lagu guda jiray ogeysiisyada Emmy Awards ee baahinta, Apple waxay soo bandhigtay laba isjiidka cusub ee taxanaha soo socda ee laga heli karo Apple TV
Apple wuxuu sii daayaa Beta sagaalaad ee macOS Catalina iyo First Beta ee watchOS 6.1 ee loogu talagalay Soo-saareyaasha
Apple wuxuu sii daayaa beta sagaalaad ee macOS Catalina iyo beta-ka ugu horreeya ee watchOS 6.1 ee loogu talagalay horumariyeyaasha.
Mar labaad waxaan maalgelin karnaa badeecooyinka Apple iyada oo aan xiiso lahayn
Apple waxay dhaqaajineysaa maalgelinta aan dulsaarka laheyn ee dukaanka internetka iyo dukaamada jirka si loo gaaro kororka iibka
IPhone cusub, Apple Watch, iPad iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan ku jirnaa Axada oo had iyo jeer waxaan ku soo qaadaneynaa qaar ka mid ah wararkii ugu fiicnaa Apple ee usbuuca ee boggeena
Laba isjiiddo oo cusub oo taxane ah Ghostwriter (Ghostwriter) iyo Caawiyayaal ka socda Apple TV + oo hadda la heli karo
Websaydhka Apple ee Apple TV +, waxaa ku jira laba isjiidood oo cusub oo ah laba kale oo cusub oo Apple ah oo loogu talagalay adeegga cusub ee VOD
Avid iyo Premiere ayaa aqbali doona qaabka Apple ee ProRes RAW
Avid iyo Premiere waxay aqbali doonaan qaabka Apple ee ProRes RAW. Apple qaybteeda waxay aqbali doontaa qaababka AVID iyo Premiere oo leh cusbooneysiinta
Processor-ka Apple Watch Series 5 wuxuu la mid yahay taxanaha 4
Sannadkan, waxay umuuqataa inaysan soo saarin processor cusub oo leh taxanaha 5, iyagoo adeegsanaya isla kii aan ka heli karnay Taxanaha 4 sanadkii hore.
Madaxweyne kuxigeenka Apple ee Isgaarsiinta Steve Dowling wuxuu ka tagay shirkadda
Bilihii la soo dhaafay, waxaan ku aragnay qaar ka mid ah dadka ugu muhiimsan shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino…
Liiska buuxa ee ciyaaraha laga heli karo maanta Apple Arcade
Mar haddii adeegga ciyaaraha Apple, oo loogu magac daray Apple Arcade, uu rasmi yahay, qodobkan waxaan ku tusinaynaa dhammaan cinwaannada laga heli karo bilowga.
Bob Iger wuxuu ka tagay guddiga maamulka Apple
Madaxa Disney, Bob Iger, oo isna ku fadhiya guddiga maamulka Apple, ayaa ka tagay Apple.
Toddobaadka muhiimka ah, iPhone-ka, Apple Watch Series 5 iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan wuxuu fure u ahaa Apple iyo adeegsadayaasheeda muhiimka ah ee cusub ee iPhone 11, laakiin ka sokow nuxurka waxaan haynaa warar dheeraad ah oo ku saabsan waxaan ka imid Mac
Polanco oo ku taal Mexico City, ayaa arki doonta dukaanka labaad ee rasmiga ah ee Apple furan
Dukaanka rasmiga ah ee rasmiga ah ee Apple magaalada Mexico City. Xaaladdan oo kale, Apple Antara wuxuu albaabada u furi doonaa Jimcaha soo socda, Sebtember 27
Apple wuxuu hoos u dhigaa qiimaha suunka Milanesse ee Apple Watch ilaa 99 euro
Apple waxay hoos u dhigtay qiimaha miisaanka Mila ESSE ee Apple Watch 50 euro, hadda qiimahiisu waa 99 euro.
IPhone 11 Pro waxaa maamula 4 GB oo RAM ah sida ku cad jaangooyooyinkii ugu horreeyay
Jaangooyooyinkii ugu horreeyay waxay soo jeedinayaan in iPhone 11 Pro cusub uu leeyahay
Apple TV + sidoo kale waxaa laga heli karaa shabakada
Adeegga fiidiyowga ee qulqulaya ee Apple ayaa sidoo kale laga heli karaa shabakadda, maahan oo keliya barnaamijyada qalabkaaga.
Podcast 11 × 03: Waxaan falanqeyneynaa khudbadii ugu dambeysay ee Apple iyo wax walboo ay soo bandhigtay
Toddobaadka 'Apple Podcast' ee Soy de Mac y Actualidad iPhone ayaa dib ugu soo laabtay xilligi kow iyo tobnaad isagoo falanqeynaya furaha ugu dambeeyay ee Apple.
Apple wuxuu soo bandhigayaa iPhone 11 bedelka iPhone XR
Apple wuxuu soo bandhigayaa iPhone 11 bedelka iPhone XR, laga bilaabo $ 699
Apple wuxuu soo bandhigayaa iPad-kiisa cusub ee 10.2-inji ah. Waxay noqon doontaa jiilka toddobaad oo wuxuu leeyahay Smart Connect
Apple waxay la wareegtay xuquuqda dokumenteriga ah "Aabayaal" by atariishada Bryce Dallas Howard
Dokumentiga soo socda ee aan ku raaxeysan doonno Apple TV + waxaa loo yaqaan 'Dads,' dokumentari ah oo ina tusaya sida qoysasku ula macaamilaan waalidnimada
Barnaamijka 'Twitch' ee ku saabsan inuu ku dhaco Apple TV
Barnaamijka 'Twitch app' ee loogu talagalay Apple TV ayaa laga heli karaa sanduuqa sare ee Apple, marka ay ku jirto beta illaa TestFlight.
Taxanaha cusub ee Apple TV + waxaa jilaya oo soo saaraya Joseph Gordon-Levitt
Joseph Gordon-Levitt ayaa ka soo muuqan doona soona saari doona Mr. Corman, taxanaha cusub ee adeegga fidinta fiidiyaha ee Apple.
Halkeen ka arki karnaa muxaadarada Apple berri oo Talaado ah
Raac qalabkaaga muhiimada maalinta berri oo Talaado ah taas oo aan ku arki doonno soo bandhigida iPhone-ka cusub iyo waxyaabaha kale ee ay soo saartay shirkadda
Apple waxay dib u furaysaa Apple Store 5-ka Avenue si ay ula jaan qaado bilowga iPhone 11
Apple waxay dib u furaysaa Apple Store 5-ka Avenue si ay ula jaanqaado soo bandhigida iphone 11. Wax soosaarka Apple ayaa la iibin doonaa bisha Sebtember 20.
Keynote, Apple Watch, MacBook Air oo wata processor-yo cusub iyo kuwo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka ugu horreeya ee Sebtembar ee la soo dhaafay waxaannu dhawr saacadood u jirnaa khudbadda maalinta Talaadada ah ee 10. Wax walba waa diyaar, laakiin ka hor taas, waxa ugu muhiimsan ee aan ka imid Mac
OnePlus waxaa ku dhiirrigeliyay Apple TV Remote telefishanka cusub
Shirkadda Aasiya ee OnePlus waxaa dhiirrigeliyay taliska Apple TV si loo abuuro amarka ay uga go'an tahay adduunka telefishanka.
Markii ugu horreysay Apple waxay dhacdadan ka sii deyn doontaa 10-ka Sebtember YouTube-ka
Markii ugu horreysay Apple waxay baahin doontaa dhacdada Sebtember 10 YouTube. Marka waxaan ka arki karnaa nuxurka madal kasta
Sida laga soo xigtay dukumiinti sir ah oo laga helay Apple waxaan haysan doonaa qalab cusub oo leh Siri for Fall of 2021
Sida ku cad dukumiintiga Apple ee xaday, waxaan haysan doonaa qalab cusub oo leh Siri by Fall 2021. Waxay umuuqataa qalab yar oo uu maamulo kaaliyaha.
SONOS waxay soo saartay marki ugu horreysay ee la qaadi karo oo ku hadla batteriga ku shaqeeya: SONOS Move
SONOS 'Hadalka ugu horeeya ee la qaadi karo waa Sonos Move, oo ah afhayeen leh batteri laysku weydaarsado oo bixisa ilaa 10 saacadood
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa barnaamijka dhacdooyinka Apple TV iyadoo la adeegsanayo Sebtember 10 astaanta Muhiimka ah
Apple waxay ku cusbooneysiisaa arjiga dhacdooyinka Apple TV calaamadda Muhiimka ah ee Sebtember 10. Waxaan sidoo kale arki karnaa astaamaha hore.
Dukaanka Apple ee cusub ee Tokyo Sabtida
Apple waxay dukaan cusub ka furi doontaa magaalada Tokyo dhamaadka usbuucan saacado yar ka hor bilowga miisaanka talaadada.
Kordhinta Safari ee ka baxsan Mac App Store ayaa joojin doonta ka shaqaynta macOS Catalina
Kordhinta Safari ee ka baxsan Mac App Store ayaa joojin doonta ka shaqaynta macOS Catalina. Horumariyayaashu waxay qiimeeyaan inay u wareejinayaan dukaanka barnaamijka app iyo 'Mac'
Xanta cusubi waxay tilmaamaysaa Apple TV cusub bisha Sebtember 10
Xanta cusubi waxay soo jeedinaysaa in Apple ay soo bandhigi karto jiil cusub oo Apple TV ah oo ay maamusho A12 Bionic
AirPods ayaa ku lumay tareenka dhulka hoostiisa mara ee New York
Masuuliyiinta Tareenka dhulka hoostiisa mara ee New York waxay ku dhawaaqayaan kordhinta ogeysiisyada ee khasaaraha Apple AirPods
Canshuuraha Trump horay ayey ujireen
Canshuuraha lagu soo rogay shirkadaha teknolojiyadda ee la shaqeeya Shiinaha ayaa dhaqan galay subaxnimadii hore. Warka xun ee dhammaantood shaki la’aan
Muhiim u ah Sebtember 10, deeqda Amazon iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan horeyba u joognaa Sebtember 1 toddobaadyaduna si dhakhso leh ayey u socdaan. Toddobaadkan waxaan ku aragnay Apple warar badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ku dhawaaqida nuxurka
Hindiya ugu dambeyn waxay yeelan doontaa dukaan rasmi ah oo Apple ah sanadka 2020
Shirkadda Cupertino iyo maamulada dalka ayaa umuuqda inay heshiis gaareen ugu dambeyntiina Apple waxay lahaan doontaa Apple Store rasmi ah sanadka 2020
Muhiim ah ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay Sebtember 10!
Apple waxay xaqiijineysaa taariikhda iyo goobta loogu talagalay furaha iPhone-ka. Bishii Sebtember 10 ee Cupertino, tiyaatarka Steve Jobs
AirPods looma qiimeynin si aad u sareeya Warbixinnada Macaamiisha
AirPods laguma qiimeynin si aad u sarreeya Warbixinnada Macaamiisha - Qoto dheer la'aanta bass, laakiin si fiican ugu dhali dhibcaha H1
Disney +: afar aaladood oo isku mar ah iyo 4k oo ah $ 6,99 bishiiba
Dalabkan ay Disney na siiso iyada oo loo marayo adeegga fiidiyowga ee qulqulaya ayaa u muuqda mid ka xiiso badan haddii siciradan ugu dambeyntii la xaqiijiyo.
Huami Amazfit GTS waa nuqul suugaan ah Apple Watch
Xiaomi way ku cad yihiin naqshada iyo nooca softiweerka ay tahay inay nuqul ka sameystaan. Xaaladdan oo kale waxay soo bandhigaan dhowr saacadood oo mid ka mid ah uu yahay "Apple Watch"
Taxanaha 'Dickinson' ee Apple si loogu soo bandhigo Tribeca TV Festival
Tixdan oo ka sheekeynaysa sheekada gabyaagii reer Mareykan Emily Dickinson, ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa Bandhigga TV-ga Tribeca bisha Sebtember 14
Tim Cook wuxuu ku dhawaaqayaa tabarucaadka iyo qayb ka mid ah Amazon
Ku deeqaha Apple waa la ogyahay markanna Amazon waxay ka mid noqon doontaa meelaha Apple ku darsan doonto badarka ciidda
Filimkii ugu horreeyay ee Dickinson, taxanaha cusub ee Apple ee loogu talagalay adeegga fiidiyowga ee qulqulka, ayaa hadda la heli karaa
Filimkii ugu horreeyay ee taxanaha Apple ee 'Dickinson' oo loogu talagalay adeegga fiidiyowga ee fiidiyowga ah ayaa hadda laga heli karaa kanaalka YouTube-ka.
macOS, tvOS, iyo watchOS waxay helayaan cusbooneysiin dheeri ah
Apple ayaa hada soosaartay cusbooneysi cusub si loogu hagaajiyo waxqabadka yar yar iyo arrimaha waxqabadka Apple Macs.
Mark Gurman iyo bambooyinkiisa macluumaadka, Powerbeats iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Tani waxay ahayd usbuucii ay soo ifbaxayeen alaabada cusub ee Apple. Mark Gurman, sida had iyo jeer halyeeyada u ah laakiin waxaan haynaa warar kale oo muuqda
Arimaha isku xirka kalandarka Google ayaa lagu soo wariyay Kalandarka Apple
Waxay ku soo wargeliyaan arrimaha isku xidhka kalandarka Google ee Kalandarka Apple. Dhibaatadu waxay saameysaa Macs, iPhone, iyo iPad.
Qalabka 10-ka cusub ee Gen Intel ee ku habboon MacBook Air
Qalabka 10-ka cusub ee Gen Intel ee ku habboon MacBook Air. Naqshadeynta kuleylka ee processor-radan waa mid aad u hooseysa
Taylor Swift inuu kaqeybqaato Kalfadhiyada Apple Stores Music Lab
Taylow Swift wuxuu ka mid noqon doonaa fadhiyada Muusikada Muusikada ee Apple ku hayso Apple Store, inkasta oo markan kaliya ay ku sugan tahay Maraykanka.
Buugga "Naqshadeeyay Apple ee Kaliforniya" ayaan hadda laga heli karin Apple Store khadka tooska ah
Buuggan muranka badan dhaliyay, ee qiimahiisa, Loogu talagalay shirkadda Apple ee California, ayaan hadda laga heli karin iibsashada kaydka tooska ah ee loo yaqaan 'American Store Apple Store', in kasta oo wali laga helayo dalal kale.
Taxanaha Apple Watch 5 Ayaa Lagu Xaqiijiyay Iyadoo Loo marayo Guddiga Dhaqaalaha Eurasia
Haddii ay dhacdo in qof kasta uu shaki ka qabo, Guddiga Dhaqaalaha ee Eurasia wuxuu diiwaangeliyey afar nooc oo Apple Watch ah oo ah waxa noqon doona jiilka soo socda.
Haddii aad iibsato Porsche Taycan cusub waxaad yeelan doontaa Apple Music asal ahaan
Apple iyo shirkadda baabuurta ee Porsche waxay ku dhawaaqayaan gaadhiga ugu horreeya ee leh asal ahaan isku-dhafan Apple Music. Midka la doortay wuxuu noqon doonaa koronto Porsche Taycan
Qiimaha wax soo saarka ee Morning Show ayaa ka sarreeya Ciyaaraha Carshiga
Sida laga soo xigtay Financial Times, taxanaha Apple ee Morning Show wuxuu leeyahay qiimo ka sarreeya halkii dhacdo ee ka badan Ciyaaraha Carshiga
Apple Music waxaa hadda laga heli karaa dadka ku hadla Amazon oo ay maamusho Alexa ee Spain iyo Jarmalka
Ku hadlayaasha ay maamusho Amazon's Alexa ayaa ugu dambeyn la jaan qaadi kara Apple Music labadaba Spain iyo Jarmalka.
Filimkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee taxanaha Bandhigga Subaxnimada ee Apple
Waxaan horeyba uheysanay awoodeena rasmiga ah ee rasmiga ah ee Apple ee u heellan majaajillada iyo riwaayadaha loo yaqaan The Morning Show
Waxaan horeyba u ogaanay qiimaha ugu macquulsan ee Apple Arcade iyo Apple TV +
Sidii la filaayey, qiimaha adeegga fiidiyowga ee Apple iyo adeeggeeda fiidiyoowga ah durba waa la dusay oo waxaan haynaa war wanaagsan iyo war xun.
Shaqaalaha Apple waxay tijaabiyaan nooca beta ee Apple Arcade
Shaqaalaha Apple waxay tijaabiyaan nooca beta ee Apple Arcade. Adeegga ayaa la filayaa inuu soo muuqdo Sebtember 23.
Windows iyo Touch Bar, fiilooyin la jabsaday oo loogu talagalay Mac iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan waxaan sidoo kale kuu soo qaadaneynaa isku-dubaridka qaar ka mid ah wararkii ugu fiicnaa toddobaadkan. Aniga oo ka imid Mac wali waxaan ku jirnaa cagtii canyon bishii Ogosto
Siri wuxuu garaacayaa Alexa laakiin kuma kari karo Kaaliyaha Google
Kaaliyaha shakhsi ahaaneed ee Apple Siri wuxuu u fiicnaaday sida tartankiisa, laakiin si tartiib tartiib ah ayuu u socdaa, sida ku cad tijaabadii ugu dambeysay Gene Munster
MacBook Pros oo leh baytariyada cilladaysan ma duuli karo Mareykanka
Maamulka Duulista Mareykanka ayaa ka mamnuucay dhamaan 2015 iyo 2017 MacBook Pros inay ku safraan diyaaradaha dalka dulmara.
Ka taxaddar fiilooyinka danabka ee aad ku xirto Mac-gaaga
Hackers wuxuu maareeyaa inuu ka helo Mac-ga xarigga jabsiga asalka ah. Tani runti waa mid khusaysa iyadoo la tixgelinayo badbaadada fiilooyinkaas.
Waxay helayaan inay ka dhigaan Bar-taabashada taabashada Windows 10
Haddii aad tahay isticmaale MacBook Pro iyo Windows 10, barnaamijkan yar waxaad awoodi doontaa inaad ku isticmaasho Touch Bar-ka Windows 10
Processor-yada Intel, shaashadda iMac oo biligleynaya iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka oo leh dhowr war oo muhiim ah sida ay ula xiriirto dunida Apple. In aan ka imid Mac waxaan soo aruurineynaa kuwa ugu fiican
Kordhinta 33 darawal ee tijaabooyinka gawaarida iswada ee Apple
Tirada darawalada loo fasaxay in lagu tijaabiyo gawaarida iswada ee Apple ayaa si aad ah kor ugu kacay bilihii la soo dhaafay.
Dhiirrigelinta 0% ee maalgelinta danta ayaa dhammaatay
Apple waxay joojineysaa maalgelinta kharashka eber ka dib bilooyin badan oo dhiirrigelin firfircoon ah. Maanta maalgelinta wax soo saarka shirkadda Apple qiimo ayey leedahay.
Xarfaha hore waxay u leeyihiin lacag ka lacag badan tan Apple
Caanka weyn ee Alphabet, ayaa dhaafay Apple markii ugu horeysay, marka loo eego lacagaha kaashka ah ee ay hayaan sida ku xusan xogtii ugu dambeysay ee ay daabacday.
Fiidiyowga cusub ee Apple ee "Behind the Mac" sagaal, markan wuxuu diiradda saaray ardayda
Fiidiyowga cusub ee Apple ee "Behind the Mac" sagaal markan wuxuu diiradda saaray ardayda. Waxaan ku arki doonnaa dad ku takhasusay cilmiga kala duwan bannaanka fasallada
Waxaan ku heli karnaa Mac leh isku xirnaanta 5G sanadka 2020 sida ku cad Digitimes
Waxaan ku heli karnaa Mac leh isku xirnaanta 5G sanadka 2020 sida ku cad Digitimes. Sikastaba xaalku ha ahaadee, in Digitimes kaliya ay daabacdo waxay abuureysaa khilaaf.
Nat Brown, Aasaasaha Xbox wuxuu ku biirayaa Apple
Nat Brown, aasaasaha Xbox, wuxuu u calaamadeeyaa Apple suurtagal inuu ku biiro kooxda Apple Arcade. Waxaan rajeyneynaa inaan aragno adeeggan firfircoon
Ayaa ku guuleysta "dagaalka" u dhexeeya Apple Music iyo Spotify?
Waxay umuuqataa inay cadahay in xilligan la tartamayaasha ugu muhiimsan ee Spotify marka laga hadlayo qulqulka muusikada ay tahay Apple Music, laakiin yaa guuleysta
Saddexdii bilood ee maaliyadeed ee Apple shirkaddu waxay dhigaysaa rikoor cusub
Apple waxay u saxiixday rubuc saddexaad maaliyadeed oo wanaagsan. Iibka iyo adeegyadu waxa ugu fiican rubuc maaliyadeedkan.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha Apple ayaa sii helaya emayllada been abuurka ah si ay uga xadaan akoonadooda
Waa wax iska caadi ah emayllada Phishing inay soo galaan oo doonaya inay qaataan xogteenna. Feejignow kahor intaadan gujin xiriiriyeyaasha ama wixii lamid ah boostada.
Laba dukaan oo cusub ayaa laga filayaa Japan sanadka 2019
Apple waxay qarka u fureysaa laba dukaan oo cusub Japan. Shirkaddu waxay soo bandhigaysaa laba astaamo oo looga shakisan yahay inay dalka ka jiri doonaan laba dukaanno oo cusub.
New MacBook Pro, Kernel Panic, makiinada maqaska iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan u nimid maalin kale oo Axad ah kiiskan waxaan haynaa dhowr ka mid ah wararka la xiriira adduunka Apple oo istaagay.
Maxaa laga filan karaa natiijooyinka maaliyadeed ee Apple ee rubuca 3aad
Maxaa laga filan karaa natiijooyinka maaliyadeed ee Apple ee rubuca 3aad. Falanqeeyayaashu waxay rajeynayaan inay ku celiyaan natiijooyinkii sanadkii hore.
Waxyaabihii ugu dambeeyay ee Sierra iyo Sare ee Amniga Sare ayaa sababa argagax ku dhaca isticmaalayaasha qaar
Waxyaabihii ugu dambeeyay ee Sierra iyo High Sierra ee amniga ayaa sababa Kernel Panic dadka isticmaala qaarkood. Apple ayaa soo jiiday cusbooneysiinta
Tesla VP hore ee injineernimada Steve MacManus wuxuu ku biirayaa Apple
Maamulayaasha sarsare waxay badanaaba isbedel ku sameeyaan dariiqyadooda shaqo taasna waa si sax ah wixii ku dhacay madaxweyne ku xigeenkii hore ee injineernimada ee Tesla.
Apple waxay iibsaneysaa qaybta 'modem Intel' oo ka badan $ 1.000 bilyan
Sida ay qortay jariidada The Wall Street Journal, iibsiga qeybtii modem-ka ee Intel, oo ku yaalay Jarmalka, ayaa qarka u saaran in la xiro.
LG wuxuu ku dhawaaqay TV-yada inay noqon doonaan HomeKit iyo AirPlay 2 isbuuca soo socda
Bilowgii sanadkan, inta lagu gudajiray dabaaldega CES, carwadii ugu weyneyd ee tikniyoolajiyadda macaamiisha oo la qabtay ...
MacOS Betas, Wikiloc on Apple Watch, xafiisyada Vancouver, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Halkii todobaad xasilloon marka ay timaado wararka ka Apple. Toddobaadkan waxaan aragnay warar xiiso leh laakiin way deggan tahay Cupertino.
Kuwani waa ku dhowaad 60 emoticons cusub oo ku imaan doona macruufka iyo Mac xilliga dayrta
Apple waxay shaacisay in 59-kan emoticon ee ay sii deysay Golaha Unicode lagu soo dari doono nidaamyadooda kala duwan ee hawlgalka dayrta.
Maqnaanshaha codsiga macOS, Twitter wuxuu cusbooneysiiyaa muuqaalkiisa shabakadda
Twitter-ka ayaa gabi ahaanba cusbooneysiiyay isku xirnaanta websaydhkeeda, isagoo aad uga fudud, in kasta oo xaqiiqda jirta aysan jirin codsi rasmi ah oo loogu talagalay macOS.
Aqoonsiga Face-ka ee Macs, macsalaameyn MacBook iyo MacBook Air, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal usbuuc ka badan waxaan kuu soo qaadaneynaa isku soo ururinta wararka ugu fiican ee aan ka imid Mac.
Qiyaasta Iibka Macluumaadka Quarter-ka 2aad Ayaa Waxoogaa Iska Hor Imaanaya
Qiyaasta iibka Mac ee rubuca 2aad xoogaa isku dhafan. Hal shirkad ayaa kootada la dhimay, mid kale oo Mac ah ayaa la iibiyaa.
Powerbeats Pro waxaa horey looga heli karaa Spain, sida wadamada kale, 249,95 euro, laakiin ma gaari doonaan dadka isticmaala illaa iyo 22-ka July.
HomePod wuxuu ku dhow yahay inuu gaaro Japan
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee Apple ee Japan, HomePod wuxuu ku dhow yahay inuu yimaado dalkan, sidaas darteed wuxuu ku darayaa tirada xadidan ee waddamada laga heli karo.
Shaqada Walkie-Talkie ee Apple Watch ayaa si ku meel gaar ah loo naafeeyay sababo la xiriira khalkhal amni
Muuqaalka Walkie-Talkie ee Apple Watch ayaa si ku meel gaar ah loo naafeeyay sababo la xiriira u nuglaansho saameyn ku leh asturnaanta dadka isticmaala.
Buugga hawlgalka ee loogu talagalay 1-ka Apple-1976 wuxuu u kacayaa xaraashka
Dhowr saacadood gudahood, buugii asalka ahaa ee 1 Apple-1976 ayaa loo aaday xaraashka, buugan oo laga heli karo $ 10.000.
6 bilood oo bilaash ah Apple Music ardayda
Apple Music waxay sii wadaa inay noqoto adeeg ujeedo leh inay kororto marka loo eego adeegsadayaasha kiiskan Apple waxay siisaa ardayda nus sano nuskeed.
Apple waxay dib u soo celineysaa barnaamijkeedii u gaarka ahaa waaxda waxbarashada: ka soo iibso Mac ama Ipad jaamacada waxna ka soo qaado Beats
Apple waxay si rasmi ah dib ugu soo celisay barnaamijkeedii dhimista ardayda, kaas oo aad ku heli karto xoogaa Beats ah si aad ugu iibsato Mac ama iPad. Soo ogow.
Ikea wuxuu fidiyaa khadadka alaabooyinka la jaan qaadi kara HomeKit
Iswiidhishka jooga Ikea waxay sii wadayaan balaarinta tirada alaabada casriga ah ee la jaan qaadi karta HomeKit waxayna hada kusoo kordhiyeen guluub cusub iyo laydh.
Apple waxay u dabaaldegaysaa guushii Mareykanka ee Koobka Adduunka ee Haweenka Kubadda Cagta iyadoo fariin cusub ku soo daabacday boggeeda
Apple waxay hada ku soo bandhigeysaa fariin cusub bogeeda rasmiga ah sida ay ugu faaneyso guushii Mareykanka ee Koobka Aduunka Haweenka. Soo ogow!
Habka asturnaanta ee Apple waa mid ku habboon, sida uu sheegay madaxa shirkadda Huawei
Madaxa Huawei, wuxuu xaqiijinayaa in qaabka asturnaanta Apple uu yahay midka ay tahay in dhammaan shirkadaha tikniyoolajiyadu raacaan.
Mitirrada gulukooska, Hal Drop, MacBook Pro cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Sida toddobaad kasta, waxaan soo uruurineynaa qaar ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee usbuuca adduunka Apple.
Sony waxay soo saareysaa samaacado cusub oo Bluetooth ah si ay ula tartanto AirPods
Halkan ka raadi dhagaha dhagaha ee cusub ee loo yaqaan 'Sony WF-1000XM3', kii ugu dambeeyay ee laga helo Sony si aad ula tartanto Apple AirPods.
Amazon waxay ku andacooneysaa inay xafideyso cajaladahaaga weligood inaad rabto inaad tirtirto mooyee
Sida laga soo xigtay shirkadda Jeff Bezos, duubista ay samaysay Amazon Echo ee isdhexgalkayaga iyaga ayaa iyaga lagu hayaa
The MacBook Air 2019 iyo MacBook Pro 2020 ayaa ka tagi doona kiiboodhka balanbaalis
Waxqabadka badan iyo dhibaatooyinka hawlgalka ee kumbuyuutarka balanbaalisku waxay umuuqdaan inay ku qasbeen Apple inay ka tagto iyaga jiilka soo socda ee MacBook
Ma aha isku xirnaantaada: Adeegyada iCloud ayaa hoos u dhacay isticmaalayaasha qaarkood
Haddii aadan marin ka heli karin iCloud ama mid ka mid ah adeegyada Apple, ha ka welwelin, adeegeyaashooda ayaa hadda hoos uga dhacaya adduunka intiisa badan.
Ma jiro nooc faafreeb ah oo ku saabsan taxanaha TV-ga Apple
Eddy Cue ayaa beeniyay wararka kala duwan ee sheegaya in waxyaabaha Apple ay ka kooban tahay loogu talagalay dhagaystayaasha oo dhan.
Kooxda Ustaraaliya ee kooxda cricket-ka waxay u adeegsadaan Apple Watch tababarka
Kooxda Cricket-ka Australia waxay u adeegsadaan codsi gaar ah Apple Watch si ay u maareeyaan dhaqdhaqaaqa jireed ee ciyaartoydooda.
Agaasimaha Hal-abuurka ah ee wakaaladda xayeysiiska Apple ee TBWA / Media Arts ayaa ka tagay shirkadda
Mid kamid ah kuwa ugu masuulka ah ku dhawaaqida guusha ee Spike Jonze's HomePod, ayaa hada ku dhawaaqay inuu ka tagayo shirkada TBWA / Media Arts
On July 30 Apple inay ku dhawaaqdo natiijooyinka maaliyadeed ee rubuca labaad ee 2019
30ka Luulyo, Apple wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijooyinka maaliyadeed rubuca labaad ee 2019, rubuca saddexaad ee maaliyadeed ee shirkadda
Kooxda Apple waxay ku muujinayaan San Francisco sharafka sharafka LGBT
Qayb ka mid ah kooxda Apple ayaa ku soo bandhigayay magaalada San Francisco iyagoo sharfaya bulshada LGBT, iyagoo wata boorar iyo funaanado u heellan. Soo ogow!
Daabacayaashu waxay yiraahdaan Apple News + waxay u keeneysaa dakhli la mid ah kan Texture
Adeegga rukunka joornaalka Apple, Apple News +, ayaa umuuqda inuusan noqon macdanta dahabka ee Apple caymisay markii ay ka iibinaysay daabacayaasha.
Sabih Khan Waxaa Loogu Magacaabay Madaxweyne Ku Xigeenka Sare ee Hawlaha Apple
Dhaqdhaqaaqa shaqo ee Apple ayaa wali firfircoon xitaa xagaaga. Sabih Khan Waxaa Loo Magacaabay Madaxweyne Ku Xigeenka Sare ee Hawlgallada
Tiro aad u yar oo ah MacBook Air 2018 ayaa la il daran arrimaha Motherboard-ka
Qaar ka mid ah moodooyinka 'MacBook Air' ee 2018 ayaa laga yaabaa inay ku dhacaan dhibaatooyinka Motherboard-ka, dhibaatadaas oo Apple ay gudaha ka garatay isla markaana ay ku sii socon doonto dayactirka kombiyuutarada si lacag la’aan ah
Apple TV + wuxuu diiradda saarayaa tayada, ma ahan tiro, ayuu yiri Eddy Cue
Eddy Cue ayaa xaqiijiyay, markale, in Apple TV + uu diirada saarayo bixinta tayada tayada, ma ahan tiro kaliya sida Netflix ay sameyso
Jony Ive wuxuu ka tagayaa Apple, Catalina beta beta iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan wararkii ugu muhiimsanaa waxay yimaadeen Khamiistii la soo dhaafay, markii bixitaankii Jony Ive ee Apple uu ku faafay shabakadda, laakiin waxaa jira warar dheeraad ah.
Netflix waxay tijaabineysaa muuqaal noo oggolaan doona inaan ku aragno waxa ku jira daaqad sabaynaysa
Ragga ku jira Netflix waxay tijaabinayaan muuqaal cusub oo u oggolaan doona waxyaabaha ka socda Netflix in lagu ciyaaro daaqad sabaynaysa biraawsar
Evans Hankey, waa madaxa cusub ee qaabeynta wax soo saarka Apple
Evans Hankey waa maamulaha naqshadeynta wax soo saarka cusub ee Apple, ka dib markii uu baxay Jonny Ive usbuucii la soo dhaafay ka dib 30 sano.
Mac Pro-ka cusub ee 2019 waxaa lagu soo saari doonaa Shiinaha ee ma noqon doono Mareykanka sidii la filayay
Mac Pro-ka cusub ee 2019 waxaa lagu soo saari doonaa warshadda Quanta ee Shiinaha, mana ahan Mareykanka sida ku dhacday noocyadii hore. Soo ogow!
Markay tahay 13-ka Luulyo Apple wuxuu furayaa Dukaankii labaad ee Apple ee Singapore
13-ka Luulyo, Apple wuxuu albaabada u furi doonaa Dukaan cusub oo Apple ah oo ku yaal Singapore, dukaan ku yaal xarun ganacsi oo qurux badan oo ku xiran garoonka diyaaradaha
60 milyan oo macmiil u ah Apple Music
Jony Ive wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tagayo Apple
Madaxa kooxda naqshadeynta Apple Jony Ive, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka tagayo shirkadda Cupertino.
Nalalka ugu horreeya ee Philips Hue oo leh Bluetooth ayaa yimid oo aan u baahnayn buundo ay ku shaqeyso
Philips ayaa soo bandhigtay moodooyin cusub oo ka mid ah nalalka casriga ah ee loo yaqaan 'Philips Hue smart' oo ku shaqeeya tikniyoolajiyadda Bluetooth-ka iyadoo aan loo baahnayn buundo.
Apple waxay kireysaa hogaamiyaha naqshadeynta ARM CPU markii warar badan ay ka jiraan Mac oo wata Chips
Apple wuxuu kireystaa hogaamiyaha naqshadeynta ARM CPU markii warar badan ay ka jiraan Macs oo leh jajabyada ARM, oo loogu talagalay 2020
Apple Pay waxay kusii fidaysaa Yurub oo dhan
Ballaarinta degdegga ah ee Apple Pay waa wax aan ku aragno Yurub sanadkii la soo dhaafay. Habka lacag bixinta ee Apple ayaa sanadkan gaadhay 13 dal oo kale
Hal daliil oo dheeri ah oo sheegaya in Google Chrome uu yahay midka ugu xun Mac
Haddii Final Cut ay la kulanto waxqabad ama arrimo qalliin, waxa ugu fiican ee la sameeyo waa in la joojiyo isticmaalka Google Chrome, maadaama ay tahay dambiilaha
Arbacada soo socota Apple Pay waxaa laga heli doonaa Portugal, Greece iyo Slovakia
Wadamada soosocda ee Apple Pay laga heli doono 26-ka Juun ayaa kala ah: Greece, Portugal iyo Slovakia.
Xanta qaar waxay kahadlaan bilaabida 16-inch MacBook Pro bisha Sebtember
Xanta qaar waxay kahadlaan bilaabida 16-inch MacBook Pro bisha Sebtember. Waxay yeelan doontaa qaraar dhan 3.072x1.920
MacOS Mojave patch, Apple Watch waxay cabiraan sonkorowga, beta beta macOS Catalina iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaad awood leh marka la eego wararka la xiriira Mac-ga iyo guud ahaan Apple. Waxaan ku siineynaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican.
Daraasad ayaa muujisay in u wareejinta Mac shaqada ay naga dhigeyso mid wax soo saar badan leh
Sahan ayaa muujiyay in u wareejinta Macs shaqada ay naga dhigeyso wax soo saar badan. Waxay u taagan tahay wax soo saarkeeda, hal-abuurkeeda iyo hanashada tiknoolajiyadda
AirPort Express, Extreme iyo Time Capsule waxay helayaan cusboonaysiin xagga amniga ah inkasta oo la joojiyay
Bishii Abriil 2018, Apple waxay si rasmi ah u shaacisay inay joojinayso iibinta Qoyska AirPorts iyo Time Capsule ee qalabka ...
Shaqaalaha Apple Store ayaa durbaba tijaabinaya Apple Card-ka dhawaana wuxuu imaan doonaa Yurub sida uu sheegay Bloomberg
Kumanaan ka mid ah shaqaalaha Apple Store ayaa durbaba tijaabinaya howlaha Apple Card.
Jilicsanaanta maalinlaha ah ee lagu ogaado Firefox
Jilicsanaan eber-maalin ah ayaa lagu ogaadey Firefox, taas oo saameysa dhammaan noocyada, moobaylka iyo desktop-ka.
Tim Cook wuxuu kor u qaadayaa liiska Glassdoor ee maamulayaasha ugu fiican
Liiska agaasimaha shirkadda Glassdoor waxaa ku yaal Tim Cook iyo Mark Zuckerberg tan iyo daabacaaddii koowaad
Loolan cusub oo loogu dabaaldegayo Maalinta Yoga
Apple waxay na siineysaa tartan cusub maalinta Yoga, caqabada la qaban doono 21-ka Juun taas oo nagu qasbeysa inaan sameyno xoogaa jimicsi ah si aan u gaarno.
tvOS 13 beta 2 wuxuu noo ogolaanayaa inaan sii wadno ku raaxeysiga waxyaabaha inta aan daalacaneyno qalabka
Beta-ka labaad ee tvOS 13 wuxuu na siinayaa suurtagalnimada inaan ku muujino fiidiyowga barnaamijka TV-ga daaqad sabaynaysa.
Shirkadda wax soosaarka JJ Abrams ayaa ka guureysa Apple
Ugu dambeyntiina waxay ahayd WarnerMedia oo ku guuleystey inuu heshiis la gaaro shirkadda wax soo saarka ee JJ Abrams, halkii laga heli lahaa Apple maadaama wax waliba ay umuuqdeen inay tilmaamayaan
Logitech Circle 2 wuxuu taageeri doonaa Video-ka aaminka ah ee 'HomeKit Secure Video'
Kala duwanaanta 'Logitech's Circle 2' wuxuu taageeri doonaa awoodda lagu keydiyo illaa 10 maalmood oo duubitaan ah oo bilaash ah iCloud.
Apple wuxuu xaddidayaa marin u helka Apple Store Online noocyada cusub ee macOS iyo Safari
Haddii aad si joogto ah ugala soo gasho Apple Store khadka tooska ah Mac oo duug ah, waxaa lagugu qasbi karaa inaad cusboonaysiiso xaddidaadda cusub ee Apple darteed
Mac Pro bishii Sebtembar, watchOS 6, Macs ee Eurasian iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka labaad ee Juun iyo warar badan oo xiiso leh oo aan ka imid Mac si aan idinla wadaago. Waa kuwan kuwa ugu caansan.
Apple waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta Mac-yada leh Fusion Drive xalinta dhibaatooyinka Boot Camp
Haddii aad la kulantay arrimaha Boot Camp ee kombiyuutarkaaga oo leh Fusion Drive, Apple waxay soo saartay cusbooneysiin ka hadlaysa arrinta.
Sawirradii ugu horreeyay ee Bakhaarka Apple ee cusub ee Taiwan, Xinyi A13 Apple Store
Dukaanka cusub ee Apple Store ee ku yaal Taiwan ayaa albaabada loo furi doonaa 15-ka June, laakiin sawirradii ugu horreeyay ee muujinaya qaabkeeda ayaa durba la sii daayay.
Apple Watch Series 4 LTE oo hadda laga heli karo Austria iyo Finland, oo dhowaan iman doona Israel
Apple waxay sii wadaa balaarinta tirada wadamada laga heli karo Apple Watch Series 4 LTE, iyadoo Austria iyo Finland ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee lagu daro liiska.
Apple ayaa laashay qorshayaashii xarunta labaad ee xogta ee Danmark
Qorshayaasha balaadhinta Yurub, marka la eego xarumaha xogta Apple, waxay umuuqataa in gebi ahaanba la joojiyay, ka dib markii la kansaliyey kii Denmark ka qorshaysan.
Noocyada cusub ee beta beta iOS 12.4, macOS 10.14.6, watchOS 5.3, iyo tvOS 12.4
Apple waxay sii deysaa noocyo beta cusub oo loogu talagalay macOS, iOS, tvOS iyo horumariyeyaasha watchOS. Xaaladdan oo kale, noocyo ka hor kuwii lagu soo bandhigay WWDC
Goldman Sachs wuxuu daacadnimo ka raadsadaa adeegsadayaasha Apple halkii macaash laga heli lahaa
Goldman Sachs wuxuu leeyahay inkasta oo uusan lacag ku samayn Apple Card, hadana waxaa ka go’an mashruucan inuu sii haysto macaamiisha Apple.
Apple Pay hadda waxaa laga helaa Nederland
Saacado kooban ayaa tikniyoolajiyadda lacag la’aanta ah ee Apple, Apple Pay, laga helay Nederland.
Mac Pro wuxuu soo bandhigi doonaa fiilooyin qarsoodi ah oo loo yaqaan 'Thunderbolt 3'
Mac Pro wuxuu soo bandhigi doonaa fiilooyin qarsoodi ah 3 - iyo 2-mitir Thunderbolt 3. Fiilooyinka 2 mitir ah ayaa wareejin kara ilaa 40 Gbps.
Apple OS cusub, Mac Pro cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Nidaamyo cusub oo loogu talagalay Mac, iPhone, iPad, Apple Watch iyo Apple TV. Waxaas oo dhan iyo in ka badan oo ku saabsan waxyaabaha muhiimka ah ee usbuuca waxaan ka socdaa Mac
Bakhaarka Passeig de Gràcia ee magaalada Barcelona ayaa furmi doona 20-ka bishaan
Taariikhda rasmiga ah ee furitaanka dukaanka Apple ee Passeig de Gràcia waxaa loo qorsheeyay Juun 20
Kaydinta fiidiyowyada kamaradaha ilaalada ee iCloud waxay u baahan tahay ugu yaraan 200GB qorshe
Thanks to Secure Video, Apple waxay noo ogolaaneysaa inaan kaydino fiidiyowyada kamaradaha ilaalada fiidiyowga 10 maalmood haddii aan leenahay qorshe 200 GB ama ka sareeya
Shirka Furitaanka WWDC 2019 Hada Waxaa Laga Heli Karaa YouTube
Isniintii la soo dhaafay, raggii ka socday Cupertino ayaa soo bandhigay, maadaama shirkii ugu horreeyay ee WWDC 2019 la qorsheeyay, ...
Apple waxay ka dambeysaa injineerada shirkad gawaarida iskeed u shaqeysa
Shirkada Cupertino ee fadhigeedu yahay ayaa gorgortan ka galaysa soo iibinta bilowga Drive.ai, oo ku takhasusay baabuurta iswada.
watchOS 6 waxaa ku jira animation lacag bixin ah oo cusub oo loogu talagalay Apple Watch
In kasta oo xaqiiqda ah in isticmaaleyaal badani ay sugayaan cusboonaysiinta interfaceOS, waxaan ahayn 5 sano ...
IOS 13 waxay ka saareysaa xaddidaadda soo dejinta arjiga cabir ahaan
Markii la bilaabay macruufka 13, xaddiga soo degsashada barnaamijyada iyo ciyaaraha ee aannu aasaasnay ​​ayaa gebi ahaanba baaba'aya.
10 × 33 Podcast: Dhammaan wixii ku saabsan iOS 13, iPadOS, watchOS 6, macOS 10.15 iyo tvOS 13
Ragga ka socda Cupertino waxay soo bandhigeen shalay dhammaan wararka ka imaan doona gacanta qaybaha soo socda ee iOS, macOS, tvOS iyo watchOS
Maxay yihiin iphone iyo ipad la jaan qaada macruufka 13?
Waxaan ku tusineynaa dhamaan boosteejooyinka, iPhone iyo iPad labadaba, oo lagu cusbooneysiin doono nooca xiga ee iOS 13 / iPadOS iyo kuwa laga tagay.
Moodooyinka Apple Watch ee la jaan qaada watchOS 6
Markaad si rasmi ah u bilawdo saacadaha 'watchOS 6', waxaad la yaabi kartaa haddii halyeeygaaga Apple Watch Series 1 uu noqon doono cusbooneysiin la'aan.
Raadi iPhone-kayga ayaa ku koraya hawl cusub si aad u hesho Mac-ga
Raadi iPhone-kayga wuxuu ku koraa ficil cusub si loo helo Mac-ga. Furashada Furaha ayaa sidoo kale la soo saaray si loo xiro Mac marka laga reebo aqoonsiga isticmaalaha
Waxaan ugu dambeyntii helnay Mac Pro cusub waana mid qaabaysan
Waxaan ugu dambeyntii helnay Mac Pro cusub waana mid qaabaysan. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan aragno illaa heerka qalabkan la cusbooneysiin karo, sida aan gadaal ka arki doonno.
La wadaag muusikada qalabkaaga iPhone isticmaale kale
La wadaag muusikada qalabkaaga iPhone isticmaale kale.
Apple wuxuu ku soo bandhigayaa macruufka 13 hab casri ah, kumbuyuutar dul-baxa ah iyo waxyaabo kale
Apple waxay hadda soo bandhigtay iOS 13 at WWDC 2019 oo leh astaamo fara badan oo cusub sida habka mugdiga ah, kumbuyuutarka rogrogmaya, heesaha heesta, Memoji Stickers ...
Apple wuxuu soo bandhigayaa tvOS 13 oo leh interface cusub, taageerada isticmaale iyo waxyaabo kale oo badan
Apple waxay soo bandhigtay nidaamkeeda cusub ee hawlgalka ee Apple TV ee Keynote WWDC 2019: tvOS 12, oo leh interface cusub, isticmaaleyaal, taageerida xakamaynta iyo waxyaabo kale oo badan.
Fashilaad ku timid adeegaha Google ayaa saameyn ku yeeshay adeegyada kala duwan ee iCloud
Galabnimadii Axada, goynta xiriirinta adeegyada Google Cloud ayaa saameyn ku yeelatay adeegyada kala duwan ee iCloud.
Apple wuxuu tirtiraa boggaga iTunes ee Facebook iyo Instagram isagoo daliil dheeraad ah u ah dhamaadka codsiga
Apple wuxuu tirtiraa boggaga iTunes ee Facebook iyo Instagram isagoo daliil dheeraad ah u ah dhamaadka dalabka. Macluumaadka waxaa loo guurey xisaabaadka Apple TV
New iPod Touch, magacyada macOS iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Ku noqoshada My Mac mar dambe lagama heli doono iCloud dhammaan noocyada macOS laga bilaabo Julaay
Ku noqoshada My Mac mar dambe lagama heli doono iCloud dhammaan noocyada macOS laga bilaabo Juun, sida ku cad dukumiintiga gudaha ee arjiga
Nagala soco toos live WWDC 2019 nuxurka
Sannadkan waxaan beddelnay nooca caymiska ee cinwaanka Apple waxaanna si toos ah ula socon doonnaa dhammaantiin kanaalka YouTube-ka
MacBook Pro wuxuu bilaabmayaa inuu gubto batteriga awgiis [Video]
Dhibaato batteriga ku jirta MacBook Pro ayaa keenta in MacBook Pro uu dab qabsado. Xaalad go'doon ah laakiin dhab ah waxa ku dhici kara baytariyada Mac
Kaarka Apple wuxuu soo saari karaa qiyaastii 1.000 bilyan oo doolar sanadkii
25-kii Maarso, Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigtay afar adeeg oo cusub oo ay rabto inay xoogga saarto qayb ka mid ah dadaalladeeda ...
Isticmaalayaasha Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka waxay awoodi doonaan inay horay u dalbadaan Powerbeats Pro bisha May 31
Ballaarinta caalamiga ah ee Powerbeats Pro waxay bilaabmi doontaa 31-ka Maajo, iyadoo laga heli karo Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka.
Waxaan horey u ogaanay codsiyada Muusikada iyo Apple TV ee macOS 10.15 maalmood kahor soo bandhigida
Waxaan horey u ogaanay codsiyada Muusikada iyo Apple TV ee macOS 10.15 maalmood kahor soo bandhigida.
Waxay Apple ka dacweeyaan iibinta xogta dadka isticmaala iTunes
Shirkada sharciga ee Apple ayaa heshay dacwad cusub oo umuuqata mid kaftan badan waxkastoo kale, maadama Apple lagu eedeeyay iibinta xogta isticmaalaha.
Baabuurta Apple-ka ayaa mas'uuliyadooda dib ugu soo celiyey Kanada iyagoo isu diyaarinaya xagaaga
Apple waxay dib u fasaxday qaar ka mid ah gawaarida hareeraha Kanada si loo hagaajiyo Khariidadaha Apple, oo ay ku jiraan xog badan oo ku saabsan dhulka
Dhallinyartii labaad ee gashay serverka Apple waa la siidaayay
Labada nin ee dhalinyarada ah ee soo galay server-ka Apple oo soo dejiyey qiyaastii 1 TB oo xog ah ayaa lagu siidaayay bilaa lacag Australia
In kabadan 400.000 euro oo loogu talagalay Apple I oo ku yimid shandad
Apple I waa la xaraashaa xoogaa ka duwan tan iyo markii ay ku jirtay shandad. Waxa kale oo ku jiray waxyaabo kala duwan oo badan
New MacBook Faa'iidooyinka, xayiraadda Huawei, cusboonaysiinta amniga iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Isbuuc xiiso leh oo muhiim ah marka la eego wararka la xiriira shirkadda Cupertino. Waxaan kuu soo bandhigeynaa soo uruurinta kuwa ugu fiican
Microsoft ayaa ka saareysa kumbuyuutarrada laptops-ka ay ku leedahay degelkeeda
Microsoft wuxuu ku biirayaa diidmada qayaxan ee Mareykanka sida muuqata oo wuxuu ka saarayaa laptops-ka Huawei boggeeda internetka.
Dhawaan Apple ayaa dukaankeeda labaad ka furaneysa Taiwan
Apple wuxuu qarka u saaran yahay inuu Bakhaar cusub oo Apple ah ka furo Taiwan, sidaas darteedna wuxuu noqonayaa dukaankii labaad ee rasmiga ah ee Apple ka furato dalka.
Jay-Z's saddex-geesoodka 'Blueprint' wuxuu ku soo laabtay Apple Music
Jay-Z's saddex-geesoodka 'Blueprint trilogy' ayaa ugu dambeyntii laga joojiyay Tidal oo keliya wuxuuna hadda ku jiraa Apple Music, Spotify iyo adeegyada kale ee qulqulka muusikada.
Sidii la filaayay, 8-ga cusub ee loo yaqaan 'MacBook Pro' wuxuu jabiyaa diiwaanka Benchmark
Lama filaan ah, 8-core MacBook Pro cusub wuxuu jabiyaa diiwaanka Benchmark. Ilaa 10% ka sareeya xudunta iyo 29% adduunka
71% ardayda waxay doorbidaan Mac-ga PC-ga
Daraasad ay sameeyeen ardayda Mareykanku waxay ina tusaysaa sida 71% ka mid ahi u door bidaan inay wax ku bartaan Mac halkii PC
FileMaker 18 ee macOS ayaa la heli karaa maanta oo leh astaamo cusub oo muhiim ah
FileMaker 18 ee macOS ayaa la heli karaa maanta oo leh astaamo cusub oo muhiim ah oo la xiriira isdhexgalka, soo dejinta iyo dhoofinta waxyaabaha, iyo amniga
Apple waxay soo dirtaa casuumaadaha loogu talagalay boodhka Juun 3!
Shirkadda Cupertino waxay casuumaadaha u fidineysaa qodobka 3-da Juun gacanta saxaafadda. WWDC aad ayey u dhowdahay
Apple wuxuu sii daayaa Cusbooneysiin Dheeraad ah oo loogu talagalay macOS 10.14.5 si loo xalliyo arrin la socota T2 Chip ee MacBook Pros
10 × 31 Podcast: A Huawei Mess, Cusub MacBook Faa'iidooyin iyo More
Huawei iyo barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro' waxay ahaayeen mawduucyada aan sida ugu badan uga wada hadalnay podcast-kii ugu dambeeyay ee horay looga heli jiray YouTube, Spotify, iTunes, iVoox ...
Hadda waxaa laga heli karaa LG UltraFine 4K kormeeraha cusub ee Dukaanka Apple
Qalabka cusub ee LG 4k, oo cabirkiisu shaashad ballaaran yahay, ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple.
Apple Wuxuu Kordhiyay Barnaamijka Beddelka Keyboard-ka ee 2018 MacBook Pro iyo Hawada MacBook-ga ee hadda
Apple waxay kordhisay barnaamijkeedii badalista balanbaaliskii dhamaadkii 2018 MacBook Pros iyo MacBook Airs.
Websaydhka Apple halka ay ku tusayso dhammaan qoraalada la heli karo ayaa ku beddelay Dhageyso iTunes oo Dhegeyso Apple Podcasts, taas oo xaqiijineysa wararka xanta ah.
Apple Pay hadda waxaa laga heli karaa Hungary iyo Luxembourg
Hungary iyo Luxembourg waxay ku biirayaan soddon dal oo adduunka ah halka Apple Pay hadda si rasmi ah looga heli karo.
Tim Cook wuxuu joojiyaa New Orleans si uu ugu deeqo qalabka Ellis Marsalis Music Center
Tim Cook ayaa ku dhawaaqay inuu ugu deeqayo qalabka kombiyuutarka dugsiga muusigga ee Ellis Marsalis ee iskuulka muusikada ee New Orleans
Google waxay joojisay xiriirkii ay la lahayd shirkadda Huawei kadib diidmada qayaxan ee Trump
Kaararka Apple, macOS Mojave 10.14.5, Fortune 500, iyo in ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Mar kale oo Axad ah waxaan soo qaadaneynaa isku soo uruurinta wararkii ugu fiicnaa ee usbuuca ee aan ka imid Mac.
Apple waxay cusbooneysiisaa degelkeeda xiriirka maalgashadayaasha iyadoo diiradda saareysa wararka
Apple waxay go'aansatay inay si buuxda u cusbooneysiiso websaydhkeeda xiriirka maalgashadayaasha, iyadoo xoogga saareysa wararka. Halkan ka ogow!
Xayeysiiska cusub ee Apple wuxuu ina tusayaa sida farshaxan-yahannadu ugu adeegsadaan Mac-sameynta
Ragga ka socda Cupertino waxay soo saareen xayeysiis cusub oo ina tusaya sida muusikiistayaasha badankood u isticmaalaan Mac si ay u abuuraan muusikadooda.
Fiidiyowgaan, shaqaalaha Apple waxay ku maadeysteen Windows 95
Shaqaalaha Apple ayaa duubay fiidiyow gudaha ah oo ah qaab xayeysiin ah oo lagu jeesjeesayo bilowga Windows 95
ING waxay ku dhawaaqeysaa Apple Pay in dhowaan laga heli doono Nederland
400 kursi oo cusub oo ka tirsan Akadeemiyada Horumarinta ee Apple oo lagu qabtay Naples
400 kursi oo cusub oo ka tirsan Akadeemiyada Horumarinta ee Apple oo lagu qabtay Naples. Kaqeybgalayaashu waxay yeelan doonaan iPhone iyo Mac bilaash ah
Podium ee Apple ee liiska Fortune 500
Ragga ka socda Cupertino waxay maareeyaan in la dhigo booska seddexaad ee liiska Fortune 500. Tani waxay ka dhigan tahay in xisaabaadka ay si aad u wanaagsan u shaqeynayaan
Apple Music hadda waxaa laga heli karaa Echo, Sonos iyo Fire TV-yada Australia iyo New Zealand
Isticmaalayaasha New Zealand iyo Australiyaanka waxay hadda u habeyn karaan Amazon Echo, Sonos, iyo Fire TV si ay ugu raaxaystaan ​​Apple Music toos.
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee macOS Mojave 10.14.6 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee macOS Mojave 10.14.6 ee loogu talagalay horumariyeyaasha. Noocani wuxuu hagaajiyaa khaladaadka nidaamka wuxuuna ka dhigayaa nidaamka mid wax ku ool ah.
Yurub waxay ku dari doontaa 15 dal oo kale liiska la jaan qaada Apple Pay
Apple waxay horeyba u haysatay 15 dal oo dheeraad ah oo ku jira liiska si ay u hirgeliso adeegga lacag bixinta iyada oo loo marayo Apple Pay
Kenwood wuxuu ku dhawaaqay 7 aaladaha cusub ee CarPlay ee la jaan qaadi kara
Shirkadda Kenwood ayaa hadda billowday 7 nooc oo cusub oo la jaan qaadi kara CarPlay iyo Android Auto, moodooyinka daboolaya dhammaan baahiyaha isticmaalayaasha.
Cusboonaysii macOS 10.14.5 si looga fogaado u nuglaanta ZombieLoad ee ku jirta Intel chips
Fadlan cusbooneysii macOS 10.14.5 si aad uga fogaato u nuglaanta ZombieLoad ee ku jirta Intel chips. Jilicsanaanta waxay u egtahay Meltdown iyo Specter
Jawaabta HP ee MacBook Touch Bar waa shaashad aad u weyn oo ka baxsan kumbuyuutarka
HP Omen X 2S wuxuu na tusayaa shaashad aad u weyn oo korka ka dhigeysa kumbuyuutarka, shaashad bixisa faa iidooyin iyo waxqabad ka badan kan taabashada leh
Apple waxay ku martiqaadeysaa horumariyeyaasha inay la yimaadaan kulankooda Apple Arcade
E-maylkoodii ugu dambeeyay, Apple waxay ku martiqaadeysaa horumariyayaashu inay la yimaadaan kulankooda ugu dambeeyay Apple Arcade si ay u ballaariyaan buugga, ogow!
Samsung Smart TVs hadda waxay la jaan qaadayaan AirPlay 2 iyo barnaamijka cusub ee Apple TV
Iyadoo la sii daayay iOS 12.3 iyo tvOS 12.3, Samsung waxay sii deysay taageerada AirPlay 2 iyo Apple TV ee 2018 iyo 2019 TV-yada.
Macaamiisha ka mid ah noocyadii hore ee 'Cloud Cloud' ayaa wajihi kara ganaaxyo
Adobe wuxuu ogeysiinayaa dadka isticmaala qoraalkii hore ee Creative Cloud ee ciqaabta suurtagalka ah haddii ay sii wadaan adeegsiga barnaamijyadooda. Waan ogahay…
Apple wuxuu ku guuleystey dacwad ka dhan ah cayayaanka FaceTime
Dacwaddii ugu horreysay ee Apple u timid cilladda amniga ee FaceTime ayaa loo diiday caddeyn la'aan.
Shaqaalaha Apple waxay bilaabaan inay helaan Kaararka Apple ee ugu horeeya
Qaar ka mid ah shaqaalaha Apple ayaa durbaba bilaabay inay helaan Kaararka Apple-ka ugu horreeya, bilo ka hor intaan si rasmi ah loo bilaabin, oo loo qorsheeyay xagaaga.
Tim Cook Wuxuu Furay Bakhaarka Maktabada Carnegie Cusub ee Magaalada Washington oo uu Caawiyo Duqa Magaalada
Dukaankan cusub ee Apple Store ee ku yaal Maktabadda Carnegie ayaa albaabada loo furay Sabtidii la soo dhaafay, isagoo noqday mashruucii ugu qiimaha badnaa ee dib u soo celinta dukaan.
Waxaan horeyba u ognahay waxa loo isticmaali doono marxaladda midabka-midabada qaansoroobaad ee Apple Park
Waxaan horeyba u ogaanay waxaad qorsheyneyso inaad u adeegsato masraxa midabka-qaansoroobaad ee bartamaha Apple Park.
Waxay ku helaan in ka badan 600.000 oo doolar xaraashka I Apple
Qiimaha lagu bixiyay kumbuyuutarrada Apple I ee xaraashka waa kuwo cajiib ah. Xaaladdan oo kale, in ka badan 600.00 oo doollar ayaa loo helay cutubkan
Barnaamijka Muusikada ee macOS 10.15 wuxuu hayaa shaqooyinka ugu muhiimsan ee iTunes
Codsiga Muusikada ee macOS 10.15 wuxuu hayaa shaqooyinka ugu muhiimsan ee iTunes. Waxay diiradda saari doontaa qaybinta muusikada, sida liisaska casriga ah.
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu helaa abaalmarin shaashadda ugu fiican sanadka
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu helay abaalmarin shaashadda ugufiican sanadka taas oo ay ugu mahadcelinayaan gudiga nuuca loo yaqaan 'OLED LTPO'. Halkan ka ogow!
Fiidiyow cusub oo aan duuliye lahayn oo Apple Park ah ayaa ina tusaya muuqaal dahsoon oo leh midabada qaansoroobaad
Fiidiyowgii ugu dambeeyay ee uu duubo Duncan Sinfield ayaa duubay wuxuu na tusayaa muuqaal dahsoon oo ku yaal bartamaha xarumaha oo leh midabada qaansoroobaad.
Bakhaarka 'Mac App Store' wuxuu soo bandhigayaa qalad labaad bishii
Bakhaarka 'Mac App Store' wuxuu leeyahay qalad labaad bishii. Xaaladdan oo kale waxay saameyneysaa Mac App Store, App Store iyo iTunes Store
Lindsay Rothschild, YouTube-kii hore iyo Disney Executive, waxay ku biirtay Kooxda Apple Music
Lindsay Rothschild, oo hore uga tirsanaan jirtay YouTube iyo Disney, waa kirada cusub ee Apple si loo hagaajiyo xiriirka Apple Music.
Layaab la'aan, AirPods 3 ayaa ka qaalisan jiilka hadda jira
AirPods 3, haddii ugu dambeyn la xaqiijiyo inay yeelan doonaan joojinta buuqa, way ka qaalisan tahay kuwa hadda jira wuxuuna bixin doonaa dhammaadka 2019.
Podcast 10 × 29: Apple-ka cusub ee uu iPhone-ku ku jirin
Qeybta 29aad ee xilli tobnaad ee 'Actualidad iPhone podcast' halkaasoo aan uga hadlayno wararka la xiriira adduunka Apple iyo guud ahaan teknolojiyadda
Apple wuxuu sii daayaa betas shanaad ee tvOS 12.3, watchOS 5.2.1, macOS 10.14.5 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayaa betas shanaad ee tvOS 12.3, watchOS 5.2.1, macOS 10.14.5 loogu talagalay horumariyeyaasha. Kaliya Apple TV ayaa fulisa barnaamijka TV-ga.
Codsigan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si toos ah uga furto xiriiryada Apple News Safari
Waad ku mahadsan tahay codsiga StopTheNews, waxaan ka furan karnaa xiriir kasta oo Apple News + ah si toos ah boggaga Safari ee kooxdeenna ay maamusho macOS Mojave.
6-dii bilood ee la soo dhaafay, Apple waxay iibsatay inta u dhaxeysa 20 ilaa 25 shirkadood
Wareysigii ugu dambeeyay ee Tim Cook siiyay CNBC, wuxuu cadeynayaa inay iibsadeen shirkad labadii ama seddexdii asbuucba mar 6-dii bilood ee la soo dhaafay
Angela Ahrendts oo horey uga tirsanaan jirtay shirkadda Apple ayaa waxoogaa ka sheekeysay khibradeeda shirkadda
Angela Ahrendts waxay ka hadlaysaa faahfaahin qaar ka mid ah xirfadeeda Apple. Waxay ku sameysaa Podcast lagu taliyay haddii aad af-ingiriisi ku fahmayso
Waxaan horeyba u ognahay sida Microsoft Edge u noqon doono macOS: waxay ku muujinayaan naqshadooda muuqaal rasmi ah
Microsoft waxay lawadaagtay fiidiyow cusub oo ay ku tusinayso sida uu u noqon doono biraawsarkooda 'Microsoft Edge' nooca loo yaqaan 'Mac version'. Raadi dhamaan faahfaahinta!
Midowga Yurub inay baaraan cabashada shirkadda Spotify ee Apple
Sidii la filayay, Midowga Yurub waxay furi doonaan baaritaan ku saabsan cabashada Spotify ee la sheegay in kaligeed kaligeed lagu haysto barnaamijkeeda.
Apple Pay waxay hadda la jaanqaadaysaa qaar ka mid ah adeegyada dawladda Ingiriiska
Apple waxay soo saartay tikniyoolajiyadda lacag-bixinta wireless-ka ah ee 'Apple Pay' sannadka 2014, oo ah adeeg iyada oo loo marayo 'NFC chip' oo ...
Powerbeats, "Apple asal ahaan", Aperture iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Tilmaamida Toddobaadkan ee waxaan ka imid Mac markaan jaleeco
Tani waa waxa uu barnaamijka 'Overcast' u ekaan karo macOS 'mahadcelin' Marzipan '
Waxaan ku tusineynaa fikrad ah sida ugu mahadsantahay mashruuca Marzipan, codsiyada macruufka ah ayaa si fudud loogu gudbin karaa macOS.
1dii smartwatches ahba 3 baa iibiya waa Apple Watch
Saamiga Apple Watch ee suuqa ayaa ahaa mid xasilloon sanadkii la soo dhaafay, iyadoo 35% ka mid ah iibka waaxda, oo ay ku xigto Samsung oo leh 11%.
Bakhaarka Mac App wuxuu leeyahay dhibaatooyin isticmaalayaasha qaarkood
Bakhaarka Mac App wuxuu soo bandhigayaa dhibaatooyin isticmaalayaasha qaarkood. In kasta oo Xaaladda Nidaamka Apple uusan soo sheegin wax arrimo ah oo khuseeya.
Shahaadada cusub ee Apple waxay muujineysaa isku-dhafka u dhexeeya OLED iyo QLED xubnaheeda xiga
Marka loo eego rukhsad cusub, qorshaha Apple wuxuu noqon doonaa in la isku daro teknoolojiyada OLED iyo QLED oo loo sameeyo hal si loo abuuro bandhigyo ilaa 1.000 ppi ah. Soo ogow!
Apple Music waxay ku dhacdaa booska shanaad daraasadii ugu dambeysay ee Asturnaanta Astaanta, oo ay la wareegeen Spotify
Muusikada Appla ayaa hoos udhacday shan meelood sahankii Cabsida Nooca ee laga sameeyay Mareykanka, Mexico iyo Imaaraadka Carabta.
Netflix waxay ku dhawaaqeysaa Casriyeynta Tayada Maqalka weyn ee Apple TV 4K
Thanks to Dolby Atmos, Netflix waxay sii wanaajin doontaa tayada maqalka ee Apple TV 4K ee loogu talagalay dadka isticmaala qorshaha Premium. Soo ogow!
Oprah wax qorshe ah uguma joogin Apple barnaamijyadeeda wadahadalka
Oprah Winfrey ayaa sheegtay inaysan u baahnayn inay ku sii socoto barnaamijka bandhigga ee caanka ka noqday adduunka oo dhan mashruuckeeda cusub ee ay la gashay shirkadda Apple.
Adeegyada iyo xidhashada jilayaasha natiijooyinka maaliyadeed ee rubuca maaliyadeed ee 2aad ee Apple
Natiijooyin maaliyadeed oo wanaagsan oo loogu talagalay Apple inta lagu jiro rubuca labaad ee maaliyadeed ee 2019. Adeegyada iyo waxyaabaha la gashado ayaa si aad ah u kordha
Kuwani waa saadaasha Apple ee rubuca maaliyadeed ee 2aad
Kuwani waa saadaasha Apple ee rubuca maaliyadeed ee 2aad. Natiijooyin wanaagsan ayaa la filayaa, iyadoon loo dhowaan tirooyinkii sanadihii hore
Aperture wuxuu joojin doonaa ka shaqeynta qoraallada wixii ka dambeeya macOS Mojave
Aperture wuxuu ku burburi doonaa noocyada dambe ee macOS Mojave. Tani waa tallaabo la filayo oo ka socota Apple oo muddo dheer ka hor joojisay barnaamijkan
Rubén Caballero, oo ah injineerka guud ee Apple 5G horumarinta modem, ayaa ka tagaya shirkadda
Dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee safka Apple ee laxiriira 5G modem wuxuu beeraa badweyn shaki ku saabsan soo saarkeeda Apple.
Diiwaangelinta Apple "Apple Original" Magaca loogu talagalay Adeegga Muuqaalka Muuqaalka
Apple waxay calaamadisay magaca Apple Original si ay ugu calaamadeyso dhammaan waxyaabaha lahaanshaha leh ee lagu bixiyo Apple TV +
Spotify wuxuu gaarayaa 100 milyan oo macaamiil adduunka ah
Tirada macaamiisha ah ee 100 milyan ee adeegga muusikada qulqulka waxaa kaliya ka sarre maray Spotify.
Apple waxay kireysatay injineer Intel ah oo ku takhasusay 5G kahor intaanay heshiis la gaarin shirkadda Qualcomm
Laba bilood ka hor intaan lagu dhawaaqin heshiiska Qualcomm, Apple waxay saxiixday mid ka mid ah kuwa ugu mas'uul ka ah horumarinta modemka 5G ee Intel.
Wireless Beats Powerbeats Pro ayaa yimid May 10 iyada oo la socota Siri
Wireless Beats Powerbeats Pro ayaa yimid May 10 iyada oo leh Siri iyo qalabka 'H1'. Waxay si gaar ah ugu habboon yihiin jimicsiga jirka.
Jake Sworski wuxuu qaabeeyaa fikrad macquul ah watchOS 6
Jake Sworski wuxuu qaabeeyaa fikrad macquul ah watchOS 6. Maxaa cusub sida ballaarinta dhaqdhaqaaqa wicitaano leh macluumaad dheeri ah iyo wax soo saar sare.
Apple iyo Qualcomm, dayactirka kiiboodhka balanbaalka, kanaalka Youtube iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Soo koobida waxyaabaha ugu muhiimsan ee usbuuca ee Soy de Mac oo aan ku xirno wararka ugu muhiimsan
Jacob Grozian wuxuu nashqadeeyay fikrad macquul ah oo waqtiga shaashadda ah oo ku saabsan macOS 10.15
Jacob Grozian wuxuu naqshadeeyaa fikradda suurtogalka ah ee waqtiga shaashadda ee macOS 10.15, halkaas oo Waqtiga Shaashadu u dhaqmo sidii codsi kaligiis ah
Heshiiska Apple iyo Qualcomm ayaa sabab u ahaa in Intel ay go’aansato inaysan sii wadin modemyada 5G
Sababta kaliya iyo tan ugu weyn ee ay Intel uga baxday horumarkii modemka 5G waxaa sabab u ah heshiiska u dhexeeya Apple iyo Qualcomm
Barnaamijka beddelka bilaashka ah ee adabtarada af Ingiriisiga ee 'Apple'
Apple waxay ufureysaa barnaamij badal ah adapter-ka awooda laga isticmaalo gudaha UK
Tufaaxa Apple wuxuu soo saarayaa Khariidado Cusub oo La Kordhiyay Iyadoo Faahfaahin Laga Helayo Gobollada Cusub ee Mareykanka
Apple ayaa ugu dambeyn sii deysay khariidadaha khariidadaha Apple ee la xoojiyay ee Arizona, New Mexico, iyo Nevada ee dalka Mareykanka. Halkan ka ogow!
Hanjabaadaha macOS waxay kordhiyaan waqtiga
Malwarebytes waxay sheegaysaa in hanjabaadaha macOS ay yihiin 60% rubucii ugu dambeeyay ee sanadka
Intel wuxuu cusbooneysiiyaa 2018 processor-ka MacBook Pro oo leh awood dheeri ah
Intel wuxuu cusbooneysiiyaa processor-yada 2018 MacBook Pro awood dheeri ah, in kasta oo ay sii waddo soo saarista Chips-yadaan 14nm, marka la barbar dhigo 10nm ee tartanka
Apple Pay waxaa laga heli karaa Austria
Buuq-joojinta AirPods ayaa imaan kara dabayaaqada sanadkan
Sida laga soo xigtay Digitimes, Apple wuxuu ka shaqeynayaa jiilka saddexaad ee AirPods, jiil seddexaad oo bixin lahaa nidaamka joojinta buuqa.
Podcast 10 × 27: Wararka aan ku arki doonno macruufka 13 iyo macOS 10.15
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo kooxda Actualidad iPhone ayaa kulmay si ay uga wada hadlaan wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple.
Apple waxay si aamusnaan ah u bilaabaysaa kanaalka Apple TV ee Youtube
Apple waxay si aamusnaan ah ugu soo bandhigtaa kanaalka Apple TV YouTube-ka waxayna ku buuxisaa waxyaabo ay ka mid yihiin isjiidka, clips-yada iyo barnaamijyada ay tabiso Apple
Maalgelinta ribo-la'aanta ah waxay la joogi doontaa Apple weligeed
Apple waxay kordhisaa maalgalinta iyada oo aan la dulsaarin ilaa bisha Juun tanina waxay naga dhigeysaa inaan u maleyno inay sii joogi doonto bilooyin dheeri ah
Saxiixyo cusub oo loogu talagalay adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple
Ku darista ugu dambeysay ee Apple TV + kooxda waxay ka timid Lionsgate, Danielle Deunesma, oo maamuli doonta suuqgeynta.
Nabaddu waxay ka dhex dhacday Apple iyo Qualcomm
Apple iyo Qualcomm ayaa hada heshiis wada gaaray si loo soo afjaro loolanka adag ee dhanka sharciga ah bilihii la soo dhaafay
Amazon waxay horey u bixisay adeeg muusig oo qulqulaya oo leh xayeysiis Mareykanka ah
Sidaan ku dhawaaqnay maalmo ka hor, adeegga muusigga ee qulqulka bilaashka ah ee Amazon ayaa hadda la heli karaa, in kasta oo kaliya Mareykanka laga helo.
Kordhintii hore ayaa laga waayi doonaa Safari macOS
Kordhintii hore ayaa laga waayi doonaa Safari macOS. Kordhinta ayaa sii wadi doonta in laga helo Mac App Store.
Apple Watch ayaa loo isticmaali doonaa in lagu furo wixii lambar sir ah ee Mac ah 'macOS 10.15'
Apple Watch ayaa loo adeegsan doonaa in lagu furo wixii lambar sir ah ee Mac ah ee macOS 10.15. Tani waa mid kale oo ka mid ah wararka aan isbuucaan kulanay.
Albumka Beyoncé ee "Lemonade" ayaa ugu dambayntii Imaanaya Apple Music Saddex Sano kadib
Beyoncé ayaa ugu dambeyn sii deyn doonta albumkeeda "Lemonade" ee Apple Music iyo barnaamijyada kale ee socodka muusigga ka dib seddex sano oo gaar ah oo ku saabsan Tidal.
Apple waxay daabacdaa hageheeda hadiyadaha Maalinta Hooyada iyada oo ay ku jiraan qalabyo badan oo lagula taliyay
Apple waxay horey u daabacday liiskeeda u gaarka ah hadiyadaha suurtagalka ah ee Maalinta Hooyada ee 2019, iyada oo ay ku jiraan talooyin qalab badan leh.
Microsoft sidoo kale waxay ku shaqeyneysaa AirPods u gaar ah
Microsoft sidoo kale waxay dooneysaa inay ku biirto xisbiga sida uu qabo Thurrot, waxay sidoo kale ka shaqeyneysaa qaab ka duwan midka AirPods ee Apple.
Tim Cook ayaa sheegay in Apple ay gacan ka geysan doonto dib u dhiska Notre Dame
Tim Cook wuxuu ku daray tacsida dadka faransiiska dhibaatadii ka soo gaadhay Notre Dame dab ka kacay oo baabi’iyay in badan.
Yamaha waxaa ku jiri doona taageerada AirPlay 2 dhammaan kuwan hadlaya iyo qalabka maqalka bishan
Yamaha ayaa tirtiray liistada kuhadlayaasheeda kaladuwan, qaatayaasha AV, baararka dhawaaqa, iyo aaladaha maqalka ee soo heli doona AirPlay 2 bishan.